နည်းပညာနှင့်သီတင်းရပ်ဝန်း: > နားဆင်ရန် +ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် - Flash သီချင်းများ+MP3သီချင်းများ+MP4သီချင်းများ(((3)))
မျက်စိမှိတ်ပြီးယုံ Aug 10, '09 3:12 PM
ချစ်ပါရစေ - မိုးဟေကို
ငါတို့နှစ်ယောက်အတွက် - မင်းမော်ကွန်း
ဘယ်လောက်ဝေးနေနေ - Rဇာနည် (302)
ဘဝချင်းခြားတောင်ချစ်မှာ - ချမ်းချမ်း (183)
မချစ်နိုင်ပဲလွမ်းတဲ့သူ - ဆုပန်ထွာ
မျက်စိမှိတ်ပြီးယုံတော့ - ခိုင်သင်းကြည်
သူကြားပါစေ - စိုးပြည့်သဇင်
အခုဘဝမှာ - မယ်လိုဒီ
အချစ် အချစ်တဲ့လား - ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း
အသည်းလေးမကွဲဖို့ စဉ်းစားနေတုန်း - သဇင်
အာဖျံကွီး - စန္ဒီမြင့်လွင်
အိမ်မက်ပြိုင်ပွဲ - ချစ်စနိုးဦး
မေ့လိုက်ပြီ - အစ္စဏီ
ပြန်ခဲ့ - Lလွန်းဝါ
နှလုံးသားကိုအရေးယူ - ဟဲလေး
ဘယ်လောက်ဝေးနေနေ – အာဇာနည်
အသည်းလေးမကွဲဖို့ ပြင်ဆင်နေတုန်း – သဇင်
ချစ်ပါရစေ – မိုးဟေကို
ငါတို့ နှစ်ယောက်အတွက် – မင်းမော်ကွန်း
ဘ၀ချင်းခြားတောင်ချစ်မှာ – ချမ်းချမ်း
အာဖျံကွီး – စန္ဒီမြင့်လွင်
ပြန်ခဲ့ – Lလွန်းဝါ
မချစ်နိုင်ပဲလွမ်းတဲ့သူ – ဆုပန်ထွာ
မျက်စိမှိတ်ပြီးယုံတော့ – ခိုင်သင်းကြည်
နှလုံးသားကိုအရေးယူ – ဟဲလေး
သူကြားပါစေ – စိုးပြည့်သဇင်
အချစ် အချစ်တဲ့လား – ၀ိုးစုခိုင်သိန်း
မေ့လိုက်ပြီလား – အစ္စဏီ
အခုဘ၀မှာ – မယ်လိုဒီ
အိပ်မက်ပြိုင်ပွဲ – ချစ်စနိုးဦး
အားသစ်မာန်သစ်ရတနာပုံတစ်ခေတ် – အဖွဲ့ 
Tags: /, အယ်လ်လွန်းဝါ, ချမ်းချမ်း, ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း, စန္ဒီမြင့်လွင်, ..., အာဇာနည်, သဇင်
ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း - မက်လောက်စရာ Jul 30, '09 9:29 AM
Tags: ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း, ...
ရောက်တုန်းရောက်ခိုက်ခြေရာလေးတော့ချန်ခဲ့ပါ....... Jul 26, '09 4:38 PM
Mistake 51 Area ၏ Member များအားလုံး ဒီနေရာလေးကနေ ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် ခြေရာလေးတော့ချန်ခဲ့ပါ.......
Ice Cream - ရေခဲမုန့်ရောင်းရန်ရှိသည် Jul 26, '09 10:11 AM
Tags: ..., ice cream
Pal - မောင်တို့လာပြီ Jul 26, '09 10:10 AM
၀၆။ မြို့ ပြည
Tags: pal, ...
No - မငြင်းပါနဲ့ Jul 22, '09 4:34 PM
Full Series Download Links
Tags: no, ...
ကျော်ထွဋ်ဆွေ - အာဘွား Jul 21, '09 1:40 PM
Tags: ကျော်ထွဋ်ဆွေ, ...
မြို့ပြရဲ့ည - Thein Myin Oo Jul 19, '09 5:53 AM
Killa Ca$h - အလုပ်ကြမ်း နဲ့ တစ်သက်တစ်ကျွန်း Jul 19, '09 5:53 AM
မျက်နှာများတဲ့ကောင်းကင် Jul 15, '09 1:19 PM
၁. ဇော်ဝင်းထွဋ် - မြတ်နိုးခြင်းနှင်းဆီ
၂. တင့်တင့်ထွန်း - လောကကျောင်းရဲ့အချစ်ဖတ်စာ
၃. ဂျီလတ် - ချစ်သူဆီ
၄. တင်ဇာမော် - ရင်ခွင်အချစ်ဦး
၅. Rဇာနည် - မုန်းဖို့မေးနေသူ
၆. ဇော်ဝင်းထွဋ် - မျက်နှာများတဲ့ကောင်းကင်
၇. တင့်တင့်ထွန်း - မျက်ရည်စိုတဲ့အပြုံး
၈. ဂျီလတ်, တင်ဇာမော် - အဆိပ်
၉. တင်ဇာမော် - လက်ဆောင်
၁၀. ဇော်ဝင်းထွဋ် - မြတ်နိုးခြင်းနှင်းဆီ
Tags: တင့်တင့်ထွန်း, တင်ဇာမော်, ဇော်ဝင်းထွဋ်, ..., ဂျီလတ်, အာဇာနည်
ဂီတသင်္ကေတ ၉ Jun 26, '09 7:03 AM
၁။ အလွမ်းဆု - ဗဒင်
၂။ တကိုယ်ရေညများ - စိုးပိုင်
၃။ သံသရာအစဉ်အဆက်ဆက် - စိုးလွင်လွင်
၄။ တစိမ့်စိမ့်ရင်ထဲမယ် - ခိုင်ထူး
၅။ သတိရပါရစေ - ဂျေမောင်မောင်
၆။ ကောင်မလေး - အောင်ရင်
၇။ လူကိုယူပါ အသည်းကိုချမ်းသာပေးပါ - စိုးပိုင်
၈။ စန္ဒယားတီးမယ် - စိုးလွင်လွင်
၉။ တောင်ပေါ်သူ - ခင်ဝမ်း
၁၀။ ဆို - လွှမ်းမိုး
၁၁။ ခရီးပန်းသူ - စိုင်းထီးဆိုင်
၁၂။ အချစ်မရှိမ၀င်ရ - နေမျိုးဆေး
၁၃။ မင်းမရှိလို့ မဖြစ် - စိုးလွင်လွင်
၁၄။ ဖြိုး - စိုးပိုင်
Tags: ဂျေမောင်မောင်, နေမျိုးဆေး, စိုးလွင်လွင်, စိုးပိုင်, ခိုင်ထူး, ဗဒင်, အောင်ရင်, ခင်ဝမ်း, စိုင်းထီးဆိုင်, လွှမ်းမိုး
ကိုင်ဇာ - သီချင်းရှင်ရဲ့ ခရီးစဉ် ၂ ( Live Show ) Jun 26, '09 7:01 AM
ကိုင်ဇာ-ဟိုတုန်းကသီချင်းများ(၁) Jun 26, '09 7:00 AM
12။ ပြေး ပြေးပြေး
ကိုင်ဇာ-ဟိုတုန်းကသီချင်းများ(၂) Jun 26, '09 6:54 AM
Big Bag - Tele Punk Jun 23, '09 1:16 PM
သီချင်း ၂ (173)
နှစ်ကပ်ထဲပါသော ရုပ်ရှင် (100)
See Green (137)
စီးရီးအခွေလိုက် Download ယူချင်ရင် အောက်မှာ Link ပေးထားပါတယ်။
Tags: ..., ကျားပေါက်
Big Bag - Tele Punk Jun 23, '09 1:15 PM
အယ်နောင်း - အနောက်တောင်မုတ်သုံ Jun 19, '09 2:50 PM
အယ်နောင်း - ခိုင်မြဲခြင်း Jun 19, '09 2:48 PM
၁၂။ အချစ် (Bonus Track)
လေးလေးဝါး - ကလေးအတွေး Jun 19, '09 2:45 PM
၇။ To ANYONE
၁၄။ I Will Always Love You
ဂျေညီညီ - အကောင်းဆုံးတေးများ Jun 19, '09 6:45 AM
ရင်ကွဲလိပ်ပြာ - ရိန်မိုး Jun 17, '09 12:50 PM
ရင်ကွဲလိပ်ပြာ - ရိန်မိုး Mediafire
အမေ့သား - ရိန်းမိုး Mediafire
first love - ရိန်းမိုး Mediafire
ရိန်းမိုး - တွဲဖက်အပြုံး Jun 17, '09 12:46 PM
တွဲဖက်အပြုံး - ဇာတ်ကားထဲမှ ရိန်းမိုးဆိုထားသော သီချင်းလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ။
မင်းသား - နေတိုး
မင်းသမီး - အိန္ဒြာကျော်ဇင်
သီချင်းနာမည်တွေကတော့ ဒီနာမည်တွေဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပါ ။
သီချင်းကိုနားထောင်ပြီး ကျွန်တော်ပေးထားတာပါ ။
နားဆင်သူများ သီချင်းနာမည် အမှန်မဟုတ်ကြောင်း ပြောလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ ။
ရိန်းမိုး - ကြယ်တစ်စင်း မြစ်တစ်စင်းရဲ့အဖေ
ဇာတ်ဝင်တေးလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ အရမ်းကောင်းပါတယ်…ကျွန်တော် ကြိုက်တဲ့သီချင်းဆိုလည်းမမှားဘူးဗျာ…နားဆင်ကြည့်ကြပါဦး…
Tags: ရိမ်မိုး, ...
ရိမ်မိုး Jun 17, '09 12:33 PM
လမင်းသစ်ပင် ဇာတ်ကားထဲမှ ရိန်းမိုး ဆိုထားတဲ့ သီချင်းလေးပါ ခင်ဗျာ ။ သီချင်းနာမည်ကိုတော့ မသိပါဘူးခင်ဗျာ ။ ဇာတ်ကားထဲက ဖြတ်ထားတာမို့လို့ မူရင်းသီချင်းတော့ မဟုတ်ဘူးဗျ ။ မူရင်းသီချင်းရရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာ ။ဇာတ်ကားကိုတော့ဤနေရာတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ။
ရင်ခုန်သံထပ်တူ - ရိမ်မိုး Jun 17, '09 7:47 AM
ရင်ခုန်သံထပ်တူ - ရိန်မိုး
NC - 13 - ပြော Jun 9, '09 4:43 PM
NC - 13 ရဲ့ Sample သီချင်းကောင်းလေးပါ။
ငါ… အရှုံးပေးနေပြီ အနိုင်ယူပါ
ဆန္ဒတစ်ခုရင်မှာသိမ်းထားတယ် ကျန်တာအကုန် နင့်အတွက်
ငါ့ဘက်က အဆင်သင့်ပါ အို… မင်းအတွက် မာနများမထားခဲ့ဘူး
အိပ်မက် မမက်ပဲ ရင်ထဲ ဒီဘ၀ရယ် အချစ်များအတွက်
နှလုံးသားတောင့်တနေလည်း မျိုသိပ်ကာ ကြိတ်မှိတ်အိပ်တော့မယ်
Tags: nc -13, ...
အယ်ဖြူ Jun 6, '09 10:33 AM
၈။ Ohh! Sunday.
Down load here : Mediafire
စန္ဒရားချစ်ဆွေ Jun 6, '09 10:26 AM
စန္ဒရားချစ်ဆွေ ရဲ့ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ တိမ်တမန် သီချင်းအပါအ၀င် အကောင်းဆုံးတေးများစုစီးမှုဖြစ်ပါတယ်…..။
Tags: .., စန္ဒရားချစ်ဆွေ
ဆယ့်နှစ်ရာသီအချစ် Jun 6, '09 10:21 AM
၁။ မိုး - Rဇာနည်+ ကျော်သူစိုး
၂။ သီတင်းကျွတ်ညလေးတစ်ည - အောင်ကောင်းထက် + ယုဇန
၃။ ရွာသာရွာပါမိုး - ဖြိုးကြီး + ငယ်ငယ်
၄။ ဆယ့်နှစ်ရာသီအချစ် - စောညီညီ + ခမ်းဆိုင်
၅။ နှင်းဝေတဲ့ဆောင်း - Rဇာနည် + မိုးမိုး
၆။ မေ ၃၁ - အောင်ကောင်းထက် + ယုဇန
၇။ မိုးနဲ့အတူငိုနေမယ် - မေစံပယ်ညို + မိုးမိုး
၈။ ဒီဇင်ဘာနံနက်ခင်း - အောင်ကောင်းထက်
၉။ ဧပရယ် - ယုဇန + အနဂ္ဂ
၁၀။ တစိမ့်စိမ့်ရင်ထဲမယ် - ဖြိုးကြီး + ကျော်သူစိုး
၁၁။ ဒီဇင်ဘာအချစ် - မေစံပယ်ညို + ဟိန်းဇော်
၁၂။ သီတင်းကျွတ်ညလေးတစ်ည - အောင်ကောင်းထက် + ယုဇန
Tags: မိုးမိုး, ရေဗက္ကာဝင်း, ဖြိုးကြီး, .., အာဇာနည်, မေစံပယ်ညို
ဇော်ဝင်းထွဋ်နှင့် တေးခေါင်းစဉ်သီချင်းများ Jun 6, '09 10:19 AM
၁. ဇော်ဝင်းထွဋ် - ဘာလိုလို
၂. အီတိုး - ရာဇဝင်ည
၃. Rဇာနည် - အသစ်ကပြန်စ
၄. ဇော်ဝင်းထွဋ်, တင်ဇာမော် - ရှင်သန်ခြင်း
၅. ဇော်ဝင်းထွဋ် - Mercury ည
၆. သျှီ - နေရာသစ်
၇. Lလွန်းဝါ - လောကအိမ်
၈. ဇော်ဝင်းထွဋ် - အချစ်စွမ်းအင်
၉. Big Bag - ဆေးဆိုးပန်းရိုက်မျက်နှာ
၁၀. ဖြိုးကြီး - ကြယ်တံခွန်
၁၁. ဇော်ဝင်းထွဋ်, ဆုန်သင်းပါရ် - ခရီးသွားမီးခိုးတန်းများ
၁၂. ဇော်ဝင်းထွဋ် - ပြတိုက်ထဲကနေ့ ပြတိုက်ထဲကည
၁၃. တင်ဇာမော် - လမ်းသစ်
၁၄. ဇော်ဝင်းထွဋ်, သျှီ - အဝါရောင်လမ်းကလေး
၁၅. ဆုန်သင်းပါရ် - အဆုံးမရှိ
၁၆. ဇော်ဝင်းထွဋ် - အားလုံးရဲ့ကိုယ်စား
MediaFire (Part 1) (Part 2)
Tags: ဖြိုးကြီး, ..
ဖြိုးကြီး - အသင်္ချေ Jun 6, '09 10:09 AM
နိုင်ဇော် Jun 6, '09 10:02 AM
နိုင်ဇော် - သိပ္ပံခေတ်
နိုင်ဇော် - မြေအောက်ကကြိုး
မိုးသက်တင်နှင့် ငွေကြယ်ပွင့်တို့ဆုံဆည်းရာ Jun 5, '09 3:00 PM
01. မိုးသက်တင် - ချစ်သူကို
02. မိုးသက်တင်, ရေဗက္က၀င်း - နေပါစေ
03. ဇော်ပိုင် - ကောင်မလေး
04. ရဲလေး - သံသရာအစဉ်အဆက်ဆက်
05. မိုးသက်တင်, Bambino - No….Darling
06. ရာဇာနေ၀င်း ဖြူဖြူကျော်သိန်း - မကြုံဖူးတော့ခက်တယ်သိပ်ချစ်သွားတယ်
07. မိုးသက်တင် Lဆိုင်းဇီ - နှစ်ကိုယ်ကြား
08. ဟေမာနေ၀င်း - ဝါဆို
09. အောင်ရင် - မင်းသိရဲ့လား
10. မိုးသက်တင်, Englandစိန် - ဘာလိုသေးလဲ
11. မိုးသက်တင,် ဇာလေး - ဒီအတိုင်းဘဲ
12. မိုးသက်တင,် သီရိဂျေမောင်မောင် - လမင်းလေးချစ်သူ
13. မိုးသက်တင် - ချစ်သူရာသက်ပန်
Tags: အယ်လ်ဆိုင်းဇီ, ရာဇာနေ၀င်း, /, ဇော်ပိုင်, မိုးသက်တင်, ရေဗက္ကာဝင်း, အောင်ရင်, ရဲလေ
ဇော်ပိုင် - အမောပြေ Jun 5, '09 2:58 PM
ဇော်ပိုင် - မိုးကောင်းကင်သစ် Jun 5, '09 2:56 PM
၁၀။ အဘိုးအိုရဲ့ ဒိုင်ယာရီ
ဇော်ပိုင်- ပြန်ဆုံမဲ့ ညနေ Jun 5, '09 2:56 PM
၁။ ဘ၀နှင့်ရင်းပြီး ချစ်မဲ့သူ - ဇော်ပိုင်
၂။ အဖော်မဲ့အလွမ်း - ဇော်ပိုင် ချောစုခင်
၃။ ပြန်ဆုံမယ့်ညနေ - ဇော်ပိုင် ဒီလေး
၄။ မင်းအချစ်တစ်ခုတည်း - ဒီလေး
၅။ ကိုယ်စီမို့ - ဒီလေး ဆွီတီ
၆။ ဝေးရမှာစိုး - ချောစုခင်
ရ။ မျှော်လင့်နေသူ - ဇော်ပိုင်
၈။ လေနှင်ခဲ့သူ - ပိုးရည်
၉။ မိုးတိမ်လိုမချစ်နဲ့ - ဒီလေး ဆွီတီ
၁၀။ ဒဏ်ရာများနဲ့ည - ဒီလေး
၁၁။ တစ်ခါတည်းတွေ့ဖူးရုံနဲ့ - ပိုးရည်
၁၂။ တစ်နေ့နေ့ - ဇော်ပိုင်
Tags: ပိုးရည်, ဒီလေး, ဇော်ပိုင်, ဆွီတီ, ချောစုခင်
ဇော်ပိုင် - အမိန့် Jun 5, '09 2:54 PM
ဇော်ပိုင်၊ ချောစုခင် - နှစ်ယောက်ထဲကမ္ဘာ Jun 5, '09 2:48 PM
၁။ နှစ်ယောက်ထဲကမ္ဘာ - ဇော်ပိုင် + ချောစုခင်
၂။ ဘေးစကားတွေမယုံနဲ့ - ဇော်ပိုင် + ချောစုခင်
၃။ အနာဂတ်လမ်း - ဇော်ပိုင် + ချောစုခင်
၄။ တစ်ယောက်ထဲပဲချစ်နေတယ် - ဇော်ပိုင်
၅။ မကြိုက်မကြိုက် - ချောစုခင်
၆။ ချိုသောဒဏ်ရာ - ဇော်ပိုင် + ချောစုခင်
၇။ အချစ်တစ်ခုနဲ့ - ဇော်ပိုင် + ချောစုခင်
၈။ တမ်းတတဲ့ည - ဇော်ပိုင်
၉။ တခြားကမ္ဘာ - ချောစုခင်
၁၀။ ဧပြီ နှင့် မေ - ဇော်ပိုင်
၁၁။ ငိုသံများ တိတ်စေသော - ဇော်ပိုင် + ချောစုခင်
၁၂။ အလွမ်းများစေသော….ဆူး - ဇော်ပိုင်
Tags: ဇော်ပိုင်, ချောစုခင်
ဇော်ပိုင်၊ ချောစုခင် - အကြင်နာအင်အား Jun 5, '09 2:47 PM
Super Film Stars Show Vol-1 Jun 5, '09 2:46 PM
၀၁။ ကျန်စစ်မင်း- လူမင်း
၀၂။ သန့်ရှင်းတဲ့အချစ်- ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း
၀၃။ သက်မဲ့အချစ်- နေတိုး
၀၄။ ယုံပါ- ဟက်ကက်၊ သင်ဇာဝင့်ကျော်
၀၅။ ဟုတ်တယ်ဟုတ်- သူထူးစံ၊ ဘရိတ်ကီ
၀၆။ မြန်မာနိုင်ငံမြင်းစီးအဖွဲ့ချုပ်သီချင်း- အဖွဲ့
၀၇။ ဒီကဖြင့်ချစ်လိုက်ရတာ- န၀ရတ်
၀၈။ မြတ်နိုးခြင်းမိုးတိမ်- ရဲအောင်၊ မေသန်းနု
၀၉။ ငုတ်တုတ်ရည်းစား- အောင်ရဲလင်း၊ နန်းဆုရတီစိုး
၁၀။ ကိုယ်ရဲ့ ကွက်လပ်- နိုင်းနိုင်း
Tags: /, နိုင်းနိုင်း, နန်းဆုရတီစိုး, ရဲအောင်, မေသန်းနု, အောင်ရဲလင်း
Super Film Stars Show Vol-2 Jun 5, '09 2:43 PM
၀၁။ လွမ်းလှပြီ…ယုံမှာလား- ကျော်ရဲအောင်
၀၂။ မြွေ- ရာဇာနေ၀င်း
၀၃။ အချစ်စစ်ရဲ့အားမာန်- ထွန်းထွန်း(Examplex)၊ သဇင်
၀၄။ ပန်းတစ်ပွင့်- စိုးမြတ်နန္ဒာ၊ နေတိုး
၀၅။ မြင်လိုက်ပြီ- ပုလဲဝင်း နှင့် အဖွဲ့
၀၆။ ကျန်စစ်မင်း- လူမင်း
၀၇။ အချစ်ကမ္ဘာ- ခင်သီတာထွန်း
၀၈။ အချစ်နဲ့ လောကကြီးအကြောင်း- အေးဝတ်ရည်သောင်း
၀၉။ နှဲသမားလေး- ဇော်ဝမ်း၊ ချိုပြုံး
၁၀။ လွမ်းလှပြီ… ယုံမှာလား- ကျော်ရဲအောင်
Tags: အေးဝတ်ရည်သောင်း, /, ခင်သီတာထွန်း, ချိုပြုံး, စိုးမြတ်နန္ဒာ, ပုလဲဝင်း, သဇင်
ဇော်ပိုင်- မြို့အ၀င်ည Jun 5, '09 2:33 PM
G-3 Jun 5, '09 1:01 PM
Tags: ..., g-3
မျိုးမဟာကျော် -၂၄နာရီကောင်မလေး Jun 5, '09 1:00 PM
မျိုးမဟာကျော် -၂၄နာရီကောင်မလေး သီချင်းကို ဒီနေရာလေးကနေDownload လုပ်ယူပါ....
Tags: မျိုးမဟာကျော်, ...
အောင်နိုင် - နှစ်ဆယ့်ငါးနှစ်မြောက် Jun 4, '09 6:46 AM
၁။ ပန်းခင်းထဲမှာ - အောင်နိုင်
၂။ အဆောင်သူလေး - ဟဲလေး
၃။ ယု - အောင်နိုင်
၄။ အချစ်မဲ့အခြားတစ်ဖက် - အောင်နိုင်
၅။ မန္တလေးသူကိုလွမ်း - သားထွေး
၆။ စိတ်နာလို့ ကောင်းတုန်းပဲလား - အက်စကဲနက်
၇။ ကံ့ကော်အိမ်မက်ရှည် - သဲနုမာ
၈။ ပန်းခရမ်းပြာ - အောင်နိုင်
၉။ ပုဂံလမ်း - သဲနုဝါ
၁၀။ စာနာတတ်သူမို့- ထွဋ်ခေါင်ဦး
၁၁။ နွဲ့ ဆိုး - မင်းမင်း
၁၂။ ပြန်လည်တမ်းတခြင်း - ကျော်ဇော မြန်မာ
၁၃။ အလွမ်းရဲရင့်သံစဉ်နှင့် နှုတ်ဆက်ခြင်း - ၀ဏ္ဏ
၁၄။ မောင့်သီရိမေ - အောင်နိုင်
၁၅။ အချစ်ဆုံးအမှတ်တရ(၁) - The Rays Gruop
Tags: သားထွေး, ထွဋ်ခေါင်ဦး, သဲနုမာ, ဟဲလေး, the rays gruop, ၀ဏ္ဏ, အောင်နိုင်, အက်စကဲနက်
ထာဝရဖြစ်စေ Jun 4, '09 6:44 AM
၁။ ဘာအတွက် ဘာကြောင့် - ရေဗက္က၀င်း
၂။ ချစ်ရတာသေတော့မယ် - Issani
၃။ နှစ်ယောက်တစ်အိမ်မက် - L လွန်းဝါ
၄။ နောက်ဘ၀မှာများ ဆုံခဲ့ရင် - L ဆိုင်းဇီ
၅။ ချစ်ဦးမှာလား - သဇင်
၆။ ပတ်သတ်ခွင့်ပြုပါ - ဟဲလေး Issani ဒီရမ်
ရ။ ကောင်းစားချိန် - ဒီရမ်၊ ဝေလျှံ
၈။ ထာဝရဖြစ်စေ - ငယ်ငယ် ရေဗက္က၀င်း Lဆိုင်းဇီ သဇင် ရတနာမိုင်
၉။ ဘယ်တော့မှ နှုတ်မဆက်နဲ့ .. GoodBye - ဆူဇီ
Tags: ရေဗက္ကာဝင်း, အယ်လ်ဆိုင်းဇီ, ဟဲလေး, အစ္စဏီ, l လွန်းဝါ, ဆူဇီ, သဇင်
ဗိုလ်လုပွဲ (၁) Jun 1, '09 12:55 PM
၀၁။ မညီမျှခြင်း - Upgrade
၀၂။ အချစ်နဲ့ဘ၀ - Oxygen
၀၃။ မိုးသည်းညလေး - Yoyo
၀၄။ အတိတ်ဒဏ်ရာ - Subject
၀၅။ ချစ်သောမိုး - The First
၀၆။ ဒီအချိန်တွေ - Opposite
၀၇။ ဆုတောင်းသူ - X-Rays
၀၈။ စိတ်မကောင်းမဖြစ်နဲ့ - Pa Loate Tote
၀၉။ လွမ်းတဲ့နေ့ - Cellular
၁၀။ ရင်ထဲကကောင်လေး - Any
၁၁။ အချစ်ဦး - Five O’ Clock
Tags: the first, yoyo
Potato Jun 1, '09 12:46 PM
01.Bun dai sieng
04.Harm jai mai wai
06.Fung kwam karng diew
08.Nee lae kwam sei jai
09.Tah proong nee chun tum mai dai
10.Chewit tee kard ter
2. Ton pid bard plae mai wai
4. Chun ruk ter
5. Prajan duang kao
6. Sing tee jai tong karn
10. Mee arai ja lhao hai fung
01. Day0(Overture)
02. Tee derm
03. Pak dee
05. Wang wai
06. Pa sar kai
08. Ruk tae Doo lae mai dee
09. Yah mar tum nah tah dee
10. Gum pang
11. Sarm we lah
12. Wung dee sar mher
01.Ruk ter pai took wun
02.Arom see thao
05.Kum torb kong hua jai
06.Nee lae kwam sei jai
08.SASSY GIRL (Refresh)
10.Ruk tae doo lae mai dai
After School - Diva Jun 1, '09 12:43 PM
Genre: kpop / rnb / dance
Nickelback Jun 1, '09 12:40 PM
02.Why Don’t You & I
03.Hero(Motion Picture Version)
04.Hero(Super Hero Mix)
05.Leader Of Men(Soul Assassin OST)
06.Learn The Hard Way(Daredevil OST)
08.Saturday Nights Alright(Charlies Angels Full Throttle OST)
09.Slow Motion(Punisher OST)
12.Yanking Out My Heart(The Scorpion King OST)
04 - I’d Come For You
08 - Shakin’ Hands
12. I Don’t Have
Scorpions Jun 1, '09 12:34 PM
02 Under The Same Sun
06 Is There Anybody There?
07 Send Me An Angel
09 Rock You Like A Hurricane
11 Big City Nights
14 Believe In Love
15 Lady Starlight
01 . Wild Child………
02 . But……The Best For You
03 . Does Anyone Know…….
04 . Stone In My Shoes………
05 . Soul Behind The Face………
06 . Oh Girl ( I Wanna Be With You )
07 . When You Came Into My Life
08 . Where The River Flows
09 . Time Will Call Your Name
10 . You…………and I…..
11 . Are You The One……….?
12 . Kiss Of Borrowed Time…….
Static-X Jun 1, '09 12:32 PM
03.Shit In A Bag
04.Im With Stupid
05.Bled For Days
13.The Trance Is The Motion
14.This Is Not
17.Get To The Gone
The Cranberries Jun 1, '09 12:31 PM
01 - Never Grow Old.mp3
02 - Analyse.mp3
03 - Time Is Ticking Out.mp3
04 - Dying Inside.mp3
06 - The Concept.mp3
07 - Wake Up And Smell The Coffee.mp3
08 - Pretty Eyes.mp3
09 - I Really Hope.mp3
10 - Every Morning.mp3
11 - Do You Know.mp3
12 - Carry On.mp3
13 - Chocolate Brown.mp3
14 - Cape Town.mp3
Michael Learns To Rock Jun 1, '09 12:29 PM
01.When Tomorrow Comes
02.It’s Gonna Make Sense
03.Shadow Side of Me
04.You Want More
09.The War is Not Over
11.Walk with Me
01. Ghost of You (#)
ကျွန်တော်တို့ဂီတရပ်ဝန်းမှာ May 30, '09 8:12 AM
၃။ ကျွန်တော်တို့ ဂီတရပ်ဝန်းမှာ
၄။ ပြိုမှာလေလား မိုးကောင်းကင်
၈။ ကျောင်းပုံပြင် ၂
Tags: ဆောင်းဦးလှိုင်, ဇော်ဝင်းထွဋ်, အဝေးကဧည့်ခန်း
ဇော်ဝင်ထွဋ်+ရင်ဂို - အိမ်မက်လမ်း May 30, '09 8:11 AM
Tags: ရင်ဂို, ဇော်ဝင်းထွဋ်
ဇော်ဝင်းထွဋ် - တစ္ဆေလမ်း May 30, '09 8:09 AM
ဇော်ဝင်းထွဋ် - အမုန်းမြို့ရဲ့အဝေးမှာ May 30, '09 8:09 AM
ဇော်ဝင်းထွဋ် (နှစ်၂၀ရှင်သန်ခြင်း) May 30, '09 8:08 AM
Rock ‘N’ Roll Never Die
Rock and Roll Night 2007 May 30, '09 8:07 AM
ဇော်ဝင်းထွဋ် - မျှော်လင့်ခြင်းခရီးသည်များ May 30, '09 8:06 AM
ဇော်ဝင်းထွဋ် - အားလုံးရဲ့ကိုယ်စား May 30, '09 8:06 AM
ဇော်ဝင်းထွဋ် - ဆေးပေါင်းခတဲ့ည May 30, '09 8:05 AM
၁။ သတ္တုများရဲ့ မြစ်ဖျား
၃။ ဆေးပေါင်းခတဲ့ည ၁
၁၂။ ဆေးပေါင်းခတဲ့ည ၂
ဆဋ္ဌကမ္ဘာ၉၆ May 30, '09 8:04 AM
၁။ မျက်လုံးများဖွင့်ကြည့် - မျိုးကျော့မြိုင်
၂။ နှလုံးသားအတွက်ကမ္ဘာ - ရဲသွင်
၃။ စက်တင်ဘာမှာဝေတဲ့နှင်း - ဟယ်ရီလင်း
၄။ ဆဋ္ဌကမ္ဘာ၉၆ - Group
၅။ မမှား - ချစ်ကောင်း
၆။ ဆက်လုပ် - ရင်ဂို
၇။ အဆင်မပြေဘူး - ဇော်ဝင်ထွဋ်
၈။ ဆဋ္ဌကမ္ဘာ ၉၆ - Group
Tags: မျိုးကျော့မြိုင်, ချစ်ကောင်း, ရင်ဂို, ဟယ်ရီလင်း, ရဲသွင်, ဇော်ဝင်းထွဋ်
ဇော်ဝင်းထွဋ် - အသစ်တဖန် May 30, '09 8:01 AM
၈။ အသက်ရှင်ရက် အဘိဓမ္မာ
ဇော်ဝင်းထွဋ် - မဟာ May 30, '09 8:00 AM
၀၁။ မဟာ ( ၁ )
၀၂။ မဟာ ( ၂ )
၀၃။ မဟာ ( ၃ )
၀၄။ မဟာ ( ၄ )
၀၅။ မဟာ ( ၅ )
ဇော်ဝင်းထွဋ် - ဂျစ်ပစီမိုးတိမ် May 30, '09 7:59 AM
၁၀။ I Don’t Want To Talk About It
ဇော်ဝင်းထွဋ် - အချစ်များသူ့ဆီမှာ May 30, '09 7:57 AM
ထစ်ချုန်းမိုး May 30, '09 7:56 AM
၁။ ထစ်ချုန်းမိုး - ဇော်ဝင်းထွဋ် မျိုးကျော့မြိုင်
၂။ အက်စစ်လိုအမုန်းများ - ဇော်ဝင်းထွဋ်
၃။ အနားမှာဘယ်သူရှိမလဲ - ရင်ဂို
၅။ ၀ဋ်ကြွေး - ဇော်ဝင်းထွဋ်
၆။ မင်းနဲ့အတူ - မျိုးကျော့မြိုင်
၇။ မေ့ထားလိုက် - ရင်ဂို
၈။ အသွင်ပြောင်းမဲ့ည - ဟယ်ရီလင်း
၉။ ထစ်ချုန်းမိုး - ဇော်ဝင်းထွဋ် မျိုးကျော့မြိုင်
Tags: မျိုးကျော့မြိုင်, ရင်ဂို, ဟယ်ရီလင်း, ဇော်ဝင်းထွဋ်
ဇော်ဝင်းထွဋ် ၊ဟေမာနေ၀င်း - နေ့သစ်တွေထဲမှာ May 30, '09 7:55 AM
၃။ သြော် မိန်းမ
ဇော်ဝင်းထွဋ် - Unplugged May 30, '09 7:53 AM
၁၀။ ပဲရစ်(စ်)မြို့ နဲ့ ………မလဲနိုင်
၁၁။ အပေါ်ထပ်နဲ့ ………..အောက်ထပ်ဇာတ်လမ်း
၁၄။ ချစ်သူရဲ့ ………သီချင်း………
ဇော်ဝင်းထွဋ် - ဆေးဆိုးပန်းရိုက်မျက်နှာ May 30, '09 7:50 AM
ဇော်ဝင်းထွဋ် - ရော့တစ္ဆေ May 30, '09 7:43 AM
၁။ ဘုရားကပေးတဲ့ မိုးများ
၆။ နယူတန်ရဲ့ တရား
၇။ စကြာဝဋ္ဌာကို ဆောက်မယ်
၁၀။ အချစ်တွေ မပြိုလဲနဲ့
ဇော်ဝင်းထွဋ် - လျှပ်စစ်သံစဉ်များ May 30, '09 7:42 AM
၀၉။ ကန္တရ ခရီးသည်
ဇော်ဝင်းထွဋ် - ရာဇဝင် May 30, '09 7:38 AM
ဇော်ဝင်းထွဋ် - နေရာသစ် May 30, '09 7:37 AM
၁။ အသည်းကွဲ Radio
ဇော်ဝင်းထွဋ်နှင့် တေးခေါင်းစဉ်သီချင်းများ May 30, '09 7:12 AM
The Worlds Greatest Love Songs May 29, '09 8:47 AM
02. Mltr - That’s Why (You Go Away)
03. Chicago - Hard to Say I’m Sorry
06. Phil Collins - Against All Odds
08. Mariah Carey - Hero
10. Westlife - My Love
11. Celine Dion - My Heart Will Go on
14. Michael Bolton - How Am I Supposed to Live
15. Bette Midler - Wind Beneath My Wings
16. Josh Groban - To Where You Are
17. Madonna - Take A Bow
18. Kenny G - Songbird
စိုင်းစိုင်း (Sample) May 29, '09 8:28 AM
၁။ First See - စိုင်းစိုင် + သဇင်
၂။ Good Bye
၃။ Hamster never be replaced
၅။ မိုင်အဝေး - စိုင်းစိုင်း + ကြိုးကြာ
၆။ ဖုတ်လိုက် ဖုတ်လိုက် (REmix)
၇။ Remember the name
ရဲလေး - နေထိုင်ခြင်း (Sample CD) May 28, '09 7:34 AM
So So Sexy (Sample)
ခရီးသွားငါးယောက် - Live May 26, '09 10:38 AM
ခရီးသွားငါးယောက် - ခရီးသွားငါးယောက် May 26, '09 10:37 AM
တာရာ - အချစ်နဲ့သိမ်းပိုက်ခြင်း May 23, '09 7:01 AM
၀၄။ နှင်းဆီတိုင်းမှာ ဆူးရှိတယ်
၀၉။ မင်းလက်ထဲမှာ အားလုံးရှိတယ်
Credit to Native
တာရာ - ပုလဲသီ တကွဲစီ May 23, '09 7:00 AM
၂။ ကျွန်တော့်ရဲ့ မိုက်မဲမှု
၄။ ရင်ခုန်သံ ဒိုင်ယာရီ
၈။ အသဲစား နှုတ်ခမ်းပါးလေး
တာရာ - အလင်းတန်းများ May 23, '09 6:58 AM
၀၃။ မျက်စိမှိတ်ထားတယ် feat: ထူးအိမ်သင်
၀၉။ မင်းလေးကို အချစ်တတ်ဆုံး
၁၄။ တံခါးပိတ် အလွမ်း
AKK May 23, '09 2:28 AM
part 1 >>>>> http://www.mediafire.com/?ywyjjm5amii
part2>>>>> http://www.mediafire.com/?jjt0xmmyjnz
Tags: akk, ...
MC Freddy & MHL (Mix Tape Vol: 2) May 23, '09 2:27 AM
MC Freddy & MHL (Mix Tape Vol: 2)
Mediafire >> http://www.mediafire.com/?1ngydgtyymu
Tags: mhl, ..., mc freedy
G - Tone May 23, '09 2:20 AM
G-Tone Mix Tape
Mediafire >> http://www.mediafire.com/?jdgmyrijkz3
Tags: g - tone, ...
သိဏ်းလင်းစိုး May 23, '09 2:19 AM
TLSOE Mix Tape
Mediafire > > http://www.mediafire.com/?kzngdzzcqjv
Tags: ..., သိဏ်းလင်းစိုး
SZ MIX Tape May 23, '09 2:17 AM
Mediafire > > http://www.mediafire.com/?jzzdncmunje
ROCK STAR Mix Tape VOL -2May 23, '09 2:16 AM
Download Link > > Mediafire > > http://www.mediafire.com/?wx3k2mdnygt Ifile.it > > http://ifile.it/5u120ol/rock_star_mix_tape_vol-2.rar
Valentine Day May 23, '09 2:14 AM
Mediafire >> http://www.mediafire.com/?eddvu53jhze Ifile.it >> http://ifile.it/kc280o9
MHL May 23, '09 2:13 AM
Mediafire >> http://www.mediafire.com/?hez3xznoz5h
Tags: mhl, ...
ရသ May 23, '09 2:12 AM
Mediafire >> http://www.mediafire.com/?eqax4qokyov
Zshare >> http://www.zshare.net/download/16720627a9ef91f7/
Mediafire >> http://www.mediafire.com/?0tjtkzm4qjy
ရသ ၊ Biggy - y ၊ ထိန်ဝင်း (The Underground Sample CD) May 23, '09 2:10 AM
Mediafire >> http://www.mediafire.com/?1wx0xiylvdr
Tags: biggy - y, ရသ
YAK May 23, '09 2:05 AM
Mediafire >> http://www.mediafire.com/?nztjgyi3djf
Tags: yak, ...
Beyond Lord Family May 23, '09 2:04 AM
Mediafire >>> http://www.mediafire.com/?wojhoiywuvj
Tags: beyond lord family, ...
ကျော်ထွဋ်ဆွေ - The Underground Mix Tape May 23, '09 2:03 AM
Kyaw Htut Swe (The Underground Mix Tape)
Mediafire >>> http://www.mediafire.com/?n52mnhwglzn
Chilli Family May 23, '09 2:01 AM
Chilli Family New Album
Mediafire > > http://www.mediafire.com/?jmdkn5wwj5t
Mediafire >>> http://www.mediafire.com/?gemtnlm22ne
Tags: chilli family, ...
ဂျောက်ဂျက် May 23, '09 1:58 AM
Mediafire >>> http://www.mediafire.com/?xvzgavleh2m
VIP = Rock Star (vol-1)
Mediafire >> http://www.mediafire.com/?xwdnmbjxhyn
For my baby - ဂျောက်ဂျက်
အမှန်လေး - ဂျောက်ဂျက်
ပိုက်ဆံ - ဂျောက်ဂျက်
အဲဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲ - ဂျောက်ဂျက် ရသ ကျော်ထွဋ်ဆွေ
ကြောက်လား - ဂျောက်ဂျက်
လေးစားမှုပျောက်ရှခြင်း - ဂျောက်ဂျက်
Tags: ဂျောက်ဂျက်, ...
MC Freedy May 23, '09 1:56 AM
1. မိုက်ကိုင်ကာဖြဲ (MC Freddy, Zay Ye`)
2. ကျောင်းသားဘ၀က (MHL, Zay Ye`)
3. မနာလိုလည်းပြော (MC Freddy, MHL)
4. ဘာတွေလုပ်မှာလည်း (MC Freddy, MHL, Zay Ye`, Purple)
5. Beautiful Girl (MC Freddy, MHL)
6. Hellen (MC Freddy, MHL)
7. Shawty (MC Freddy, MHL, Zay Ye`)
8. ဒီလိုက (MC Freddy, MHL)
9. သနားတယ် (MC Freddy, MHL, M Zay)
10. အတူတွဲက (MC Freddy, MHL, MC Thuya)
Download MC Freddy (Underground Album)
Tags: ..., mc freedy
Platform May 23, '09 1:55 AM
Mediafire >> http://www.mediafire.com/?dl5nndny5zt
Tags: platform, ...
YKG (Yay Kyaw Game) - Sample May 23, '09 1:52 AM
Megaupload >> http://www.megaupload.com/?d=1TJS4PJL
Tags: ykg, ...
Tiny Twist (စိုးဖြိုး ၊ Bobbysoxer) May 23, '09 1:50 AM
Mediafire >> http://www.mediafire.com/?mmyzmiu22kw
Tags: tiny twist, ...
TPS May 23, '09 1:47 AM
Mediafire >> http://www.mediafire.com/?yynhymydlgi
Tags: tps, ...
Y M N - ကြိုဆိုပါတယ် ငါ့ကမ္ဘာ May 23, '09 1:41 AM
Mediafire >> http://www.mediafire.com/?wjnl2rkwwmq
Tags: ..., y m n
Hoobastank May 23, '09 1:29 AM
Hoobastank ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်အယ်လ်ဘမ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ အမေရိကန် Post-grunge band ဖြစ်ပြီး ဒီအယ်လ်ဘမ်ဟာ သူတို့ရဲ့ စတုတ္ထမြောက်အယ်လ်ဘမ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အယ်လ်ဘမ်များဟာ ကမ္ဘာတ၀ှမ်း ချပ်ရေ၁၀သန်းကျော်ရောင်းချထားရတဲ့ နာမည်ကြီး ၀ိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးအစား - Alternative rock, Post-grunge
Mediafire Ifile.it Tracks 1. Same Direction 3:15 2. Out Of Control 2:42 3. What Happened To Us? 4:00 4. Escape 3:45 5. Just One 3:20 6. Lucky 3:00 7. From the Heart 3:04 8. The Reason 3:53 9. Let It Out 3:18 10. Unaffected 3:34 11. Never There 3:04 12. Disappear 5:06 13. Never Saw It Coming 3:21 14. Open Your Eyes 3:44 Download From Mediafire